Baarlamanka Puntland oo cafiyay eedaymo xeer-jebin iyo musuq-maasuq oo ay u haysteen wasiirka amniga – Kalfadhi
Golaha wakiillada Puntland ayaa cafis u fidiyay wasiirka amniga iyo hubka dhigista mudane Cabdisamad Maxamed Gallan oo ay toddobaadkii hore guddiga amniga iyo nabadgelyada ee goluhu ay u jeediyeen eedaymo dhawr ah.
Eedaymaha wasiirka loo haystay ayaa isugu jiray sharci-jebin iyo musuq-maasuq. Guddiga amniga iyo nabadgelyada oo warbixin arrimahaas faahfaahinaysa golaha keenay waxay kaloo ku eedeeyeen in wasiirku diiday inuu dhawro la shaqaynta guddiga oo la xisaabtan iyo korjoogtayn ku leh hay’ado amni oo ay wasaaraddu ka mid tahay.
Wasiirka amniga mudane Cabdisamad Gallan ayaa maanta golaha hortegay wuxuuna ka jawaabay su’aalo kulul oo arrimihii lagu eedeyay ku sal qotoma isagoo ka warbixiyay hawl-galladii amniga ee ay ka wadeen Boosaso
Gudoomiyaha golaha wakiillada mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed ayaa doodda kadib wuxuu sheegay in inta badan xubanaha goluhu ay cod gacan-taag ah ku aqbaleen raali-gelin uu wasiirku eedihii loo haystay ka bixiyay.
“Qofku hadii la soo eedeeyo wuxuu xaq u leeyahay inuu is difaaco, dastuurkaana siinaya. Qodobka 64, farqadiisa 17aad wax dembi ah oo laga galay ma jiro.” ayuu yiri Dhoobo-daareed. “Goluhu wuxuu u batay in la cafiyo, waxaa weeye wasiirkaasi saas buu cafis ku yahay” ayuu yiri.
Wasiirka amnigu wuxuu maanta sheegay in ay waajib dastuuri ah tahay inuu la shaqeeyo guddiga. Wasiirku wuxuu si buuxda raali-gelin uga siiyay guddiga amniga iyo nabadgelyada iyo golaha oo dhanba khaladka dhacay ee wada-shaqayn la’aanta ah.
“Kalsoonida in lagaala noqon karo, waxaan oranayaa waa tan I soo kallihisay, iyadu ra’yi uma baaha (No comment)” ayuu yiri Gallan. “In aanu wada-shaqayno maahee; waxaan rajaynayaa guddiga, guddiyada baarlamanka iyo wasaaradda, wasaaradaha Puntland ugu wada-shaqaynta wasanaagsan in aannu noqon doono haduu illaahay idmo,” ayuu yiri.
Guddiga amniga iyo nabadgelayda ee golaha wakiillada Puntalnd waxaa hoggaamiya Gen. Cabdicasiis Siciid Gacameey oo mudo dheer ciidamada ku jiray marna soo noqday taliyaha ciidanka booliska, waxaa kaloo xubno sare ka ah Cabdijamal Cismaan oo wasiirka amniga hore u ahaa iyo taliyihii hore qaybta gobolka Bari Col. Cabdixakiin Yuusuf Xuseen oo saddexduba ka mid ah baarlamanka.
Xubnaha Guddiga Amniga iyo Nabadgelyada iyo Xildh. Gen. Gacamey oo warbixintan u jeedinaya golaha wakillada /Salaaso 18 Juun, 2019
Mudane Cabdixakiin Dhoobo-daareed gudoomiyaha golaha wakiillada ayaa xiritaankii kalfadhigii 43aad wuxuu guddiyada ku amray in ay si wanaagsan ula xisaabtamaan hay’adaha dowladda ee ay la xisaabtanka ku leeyihiin, isagoo ugu baaqay in ay golaha ku soo celiyaan hay’adaha dowladda ee la xisaabtankaas ka meeraysta si tallaabo looga qaado.